Jewelry Box - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Jewelry Box)
Igbe kaadiboodu na mkpuchi nke ichota mgbanaka
Igbe kaadiboodu na mkpuchi nke ichota mgbanaka Igbe kaadiboodu, igbe mgbanaka nke nwere mkpuchi, igbe ngwoolu di nma. Igbe onyinye onyinye, ihe okike pụrụ iche nke ejiri akara dee, mara mma ma maa mma. Igbe nkwakọ ngwaahịa mgbanaka, igbe onyinye maka mgbanaka, ogo na ahaziri ahaziri, juputara na ụlọ ọrụ gị. Chọrọ...
Ejiji na-eji mpempe akwụkwọ eji achọ mma na mpempe akwụkwọ Akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpịachi mpempe akwụkwọ, igbe mpempe akwụkwọ maka ọla, yana njiri ọkụ foil na ntụpọ UV. Igbe mpempe akwụkwọ ọla, igbe ihe eji achọ mma na magnet na rịbọn, mma. Igbe mpempe akwụkwọ nwere ndọta, igbe ịkwado igbe akwụkwọ mma, okomoko na...
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ eserese maka onyinye onyinye ọla Akwukwo ọla nke siri ike nke nwere agba di elu nke zuru oke maka ngwugwu ọla Igbe mpempe akwụkwọ eserese na PU puller, nwere ike imepe igbe ahụ n'ụzọ dị mfe Liyang Paper Products Co., Ltd, bụ nke e wusiri ike na 1999, ya na nnukwu ndị ọrụ ọgbara ọhụrụ...
Ejiji kaadiboodu uwe na-adakọ Igbe mpempe akwụkwọ mkpuchi, igbe mpịachi maka uwe, ọla, ịchọ mma ... prodicts niile dabara adaba . Igbe mpempe akwụkwọ mkpuchi, nhazi okomoko na ezigbo mma, gosipụta ụlọ ọrụ gị. Igbe mpempe akwụkwọ maka onyinye, igbe onyinye onyinye na akara ngosi e biri ebi na matte lamination, ezigbo...
Inye ọla na-etinye mkpọ igbe
Inye ọla na-etinye mkpọ igbe Igbe okirikiri ịchọ mma, igbe ngwugwu ọla nwere akara e biri ebi, okomoko . Igbe ọla, igbe ọkpọkọ maka ọla, na -emechasịsị ga-aka mma. Igbe onyinye, igbe ngwugwu ngwaahịa na ntinye, nwere ike ịkwakọ ya nke ọma ma gosipụta ụlọ ọrụ gị . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ ahịa, gaa n'ihu ma...
Igbe Mgbaaka PU Akpụkpọ anụ Onyinye ọla Igbe ọla eji ụdị drawer maka ngwugwu ọla; Igbe akwụkwọ ọla ndị dị otú ahụ na-anabata ibipụta akara ngosi omenala ma ọ bụ stampụ ọlaọcha. N'ime obere akwa velvet maka ihe nchekwa mma. Pink agba agbapụta na-ebi akwụkwọ na-acha akwụkwọ ozi igbe ọla anya elegante na mma. Igbe...
Gburugburu agba aja aja kraft akwụkwọ onyinye ọla
Gburugburu agba aja aja kraft akwụkwọ onyinye ọla Akwukwo onyinye onyinye siri ike gburugburu, na mbiputa okike di elu maka akara ma o bu ihe okike gi igbe onyinye aja aja, igbe akwụkwọ ozi kraft gbara gburugburu maka onyinye Obere okirikiri mpempe akwụkwọ ọla mma na mpempe akwụkwọ ọla edo na-eji ọla edo edo Li yang...
Akwukwo onyinye di na nti Igbe nchere ọla , nke a na-ewu ewu n'ụdị igbe igbe, mkpuchi na igbe dị n'okpuru, igbe igbe pịrị apị , igbe mpempe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ. Igbe ọla aka na ọla nwere akwa silk ịchọ mma iji mee ka igbe ahụ bụrụkwuo okomoko! Igbe mpempe ntị na velvet fanye maka nkwakọ nke ọla Jiri obiọma...
Igbe ndị eji achọ mma igbe na-etinye ihe mkpuchi
Igbe ndị eji achọ mma igbe na-etinye ihe mkpuchi Igbe kaadiboodu na itinye, igbe drawer na mkpuchi, igbe kaadiboodu nwere mkpuchi, igbe ndozi ihe . Igbe onyinye ọla na ntinye, igbe nkwakọ ọla, igbe onyinye. Igbe drawer nwere mkpuchi, igbe drawer maka ngwugwu ọla, igbe na ntinye, mma . Chọrọ ngwaahịa dị mma dị oke ọnụ...
Akwukwo onyinye onyinye ndi ahia ahia ndi ahia Igbe mpempe akwụkwọ eji achọ mma akwụkwọ , emere na mkpuchi dị mfe na ụdị igbe igbe, igbe okirikiri, igbe mpịakọta ewepụghị, igbe mpempe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ maka nhọrọ gị. Igbe nchekwa ọla na ntinye ụfụfụ dị nro maka itinye ya mma, kwusi nke ọma ọla ahụ ịkwaga! Jiri...
Akwukwo onyinye di nma nke edere edere zuru oke Igbe ịchọ mma igbe , nke emere na igbe igbe ọkaibe, igbe igbe, igbe igbe, igbe akwụkwọ na ihe ndị ọzọ maka nhọrọ gị. Akwukwo zuru oke nke agba mara mma nke eji agba oyuyo na agba oji, nwere ike ikwe ka imeghe igbe a oge obula ichoro Jiri nwayọ rịba ama na ngwaahịa anyị...
Obere akpa ohia eji enyo onyinye A na- eme igbe igbe igbe na 350gsm art art, igbe dị mfe maka ngwugwu onyinye Onyinye eji eji udiri onyinye onyinye x, ezigbo agba nchapu ichacha Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Dongguan, China. Pụrụ iche n’imepụta mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ...
ojii biri ebi ọcha nnukwu mpịachi igbe ohiri isi A na-etinye igbe ọkpọkọ buru ibu na 400gsm matt mpempe akwụkwọ na-enweghị akwụkwọ, igbe dị mfe maka nchịkọta onyinye igbe ohiri isi na- acha ọcha, na njirimara gị na mbipụta oji ojii Liyang Paper ngwaahịa co., Ltd bụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ azụmaahịa dị na Dongguan, China....
Igbe ndozi chọkọlel ọla ọla maka ụmụ nwanyị
Igbe ndozi chọkọlel ọla ọla maka ụmụ nwanyị Igbe akpịrị akpịrị na-anabata obi akara gị ma bipụta ya, igbe ọla dị otú ahụ maka ụmụ nwanyị Fancy ụdị igbe ịchọ mma na igbe elegante obi maka ịkwado onyinye nke dabara adaba maka inyefe onye ị hụrụ n'anya onyinye. Liyang Akwụkwọ Ngwaahịa Co., Ltd bụ...
Onyinye kaadiboodu eji ebu ihe ohuru Onyinye kaadiboodu onyinye igbe igbe, igbe agba odo pink igbe tinyere akwa, ihe okomoko na ejiji . Igbe onyinye igbe mpempe akwụkwọ onyinye, igbe ngwungwu ọla na ntinye, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe onyinye kaadiboodu onyinye, igbe onyinye maka ọla, ya na njiri mara...
Akwukwo nri eji eme ihe eji eme ihe Igbe ngwugwu mpempe akwụkwọ eji etinye akwụkwọ, igbe eserese pink na teepu matte, okomoko na ejiji . Igbe eji etinye ihe eji etinye ya, igbe ngwugwu ọla na ntinye, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Igbe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, igbe onyinye maka ọla, na njirimara gị,...
Igbe mpempe akwụkwọ ojii na-eji mma na drawer Igbe mpempe akwụkwọ na drawer, igbe draịva pink na teepu matte, okomoko na ejiji . P ackaging igbe na drawe r, ọla nkwakọ igbe na wet, nwere ike na-egosi gị ngwaahịa ọma. P aper igbe nwere drawe r , igbe onyinye maka ọla, na njirimara gị, juputara na ụlọ ọrụ gị...
Akwukwo Drawer Box mpempe akwụkwọ dị elu Igbe mpempe akwụkwọ ojii na-eji oji, igbe eserese pink na teepu matte, okomoko na ejiji . Mpempe akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ , igbe nkwakọ ngwaahịa ọla na ntinye, nwere ike igosi ngwaahịa gị nke ọma. Akwukwo Akwụkwọ , igbe onyinye maka ọla, na njirimara gị, juputara...
Jewelry Box Jewelry box Jewellery box jewelry box Jewelry gift box Paper jewelry box Jewelry box with logo Igbe Drawer Box